बजारमा तीव्र चलखेल, ठालूको सिण्डिकेट, सानाको हरिबिजोग ! Bizshala -
बजारमा तीव्र चलखेल, ठालूको सिण्डिकेट, सानाको हरिबिजोग !
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड र केही सेयर दलालहरुको मिलेमतोमा लगानीकर्ताको आन्दोलनपछि तीव्र बनेको बजारको चलखेलले अनौठो परिणाम देखाउन थालेको छ ।
बजारमा खुलेआम चलखेल भएर निश्चित समूहले मनपरी गर्दा समेत नियामकहरु चूपचाप बसेका छन् । आन्दोलन गरेर बजारलाई सुधार गर्छौ भन्ने सेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी समेत पछिल्लो समय सुस्त बन्दा समस्या थप विकराल बन्दै गएको छ ।
बजारमा तीव्र चलखेल भएकै कारण नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दा समेत कारोबार चाहि २६ करोडको न्यून विन्दूमा झरेको हो । तीव्र चलखेलकै कारण आगामी दिनमा समेत बजारले सकारात्मक संकेत नदिने भन्दै लगानीकर्ता त्रसित मानसिकतामा देखिएका छन् । बजारमा खुलेआम चलखेल भएर निश्चित समूहले मनपरी गर्दा समेत नियामकहरु चूपचाप बसेका छन् । आन्दोलन गरेर बजारलाई सुधार गर्छौ भन्ने सेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी समेत पछिल्लो समय सुस्त बन्दा समस्या थप विकराल बन्दै गएको छ । सबै पक्षको उदासीनता र तीव्र चलखेलले सर्वसाधारण लगानीकर्ता चाहि मर्काका शिकार भइरहेका छन् ।
बजार परिसूचक सोमबार ११.५२ अंकले बढे पनि कारोबार रकम चाहि २६ करोडमा झरेको छ । नेप्से परिसूचक १४५८.९७ अंकको उचाईमा रहे पनि कारोबारमा यसरी कमी आउनुलाई दुनियाँको आँखामा छारो हाल्नैका लागि बजार बढाउने नाटक रचिएको प्रष्ट हुने एक विश्लेषक बताउँछन् । ''बजारमा निश्चित समूहको सिण्डिकेट रहेको र उनीहरुले जस्तो र जहिले चाह्यो बजारलाई त्यस्तै र सोही समयमा घटाउने र बढाउने काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण समेत हो यो ।'' ती विश्लेषकले बिजशालासँग भने-''सूचक दोहोरो अंकले बढ्दा कारोबार रकम चाहि २६ करोडमा झर्नु भविष्यमा बजार तथा लगानीकर्ताका लागि खतरा हो, लगानीकर्ता यस्ता चलखेलप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।''
सोमबार होटल र विकास बैंक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । वाणिज्य बैंक समूह ११.०३ अंकले बढेको छ भने जलविद्युत समूहमा ९.९३, बिमा समूहमा १४७.८३, बित्त समूहमा ४.९६ र अन्य समूहमा २.८६ अंकको बढोत्तरी भएको छ । होटल समूह ५.३९ अंकले घटेको छ भने विकास बैंकमा १.४७ अंकको झिनो गिरावट देखिएको छ ।
सोमबार ११७ कम्पनीका कुल २६ करोड ४५ लाखको सेयर किनबेच भयो । वाणिज्य बैंकहरुले १२ करोड ५४ लाखको मात्र कारोबार गरे । बिमा कम्पनीहरुले ७ करोड ६३ लाख, विकास बैंकहरुले ४ करोडको मात्र कारोबार गरे ।
कम्पनीगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँको गर्यो । यस्तै, कुमारी बैंकले १ करोड ७० लाखको कारोबार गर्यो भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले १ करोड २९ लाखको कारोबार गर्यो । धेरै कारोबार गर्ने १० कम्पनीको सूचिमा यी ३ बाहेक अन्य कम्पनीको कारोबार १ करोडको उचाईमा समेत पुगेन ।
चलखेल व्याप्त बजारमा दुई कम्पनीले पैसा छापे । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक र एनबी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको हो ।
यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको सेयर मूल्यमा चाहि सबैभन्दा ठूलो पहिरो गयो । यो कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा घट्यो ।
nepal stock exchange nepse up
काठमाण्डौ । सोमबार बजार परिसूचक सामान्य अंकले घटे पनि कारोबार रकम...
सोल्टीका सेयरधनी बन्ने भए मालामाल, मंसिर २८ मा साधारणसभा, बुक
काठमाण्डौ । सोल्टी होटलले एकसाथ नगद लाभांश, बोनस सेयर वितरण तथा...
काठमाण्डौ । तिहारपछि खुलेको बजारमा उत्साह देखिएको छ । तिहार विदा...
गुराँस लघुवित्तले १.८ करोडको आइपीओ ल्याउने
काठमाण्डौ । दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको गुराँस लघुवित्त बित्तीय...
२६ लाख ९५ हजार पर्ने फियाट् पुन्टो इभो प्योर अब नेपालमा
काठमाण्डौ। नेपालका लागि विश्वकै सातौं ठूलो अटो निर्माता कम्पनी...
सेयरबाट मालामाल बन्नु छ ? पछ्याउनुहोस् यी ७ सूत्र
काठमाण्डौ । स्टक मार्केट(सेयर बजार)मा लगानी गर्न धेरै मानिस डराउँछन...
सेयर शिक्षा: सेयर कारोबारबाट धनी बन्ने १० सूत्र
►राजु पौडेल सेयर कारोबार गरेर सबैलाई धनी हुने चाहना हुन्छ । तर,...
ऋण तिर्न कालिका पावरले १८ करोडको आइपीओ ल्याउने
काठमाण्डौ । कालिका पावर कम्पनीले १८ करोड मूल्य बराबरको आइपीओ...